Maxaa looga hadlayaa Kulanka Maanta Golaha Shacabka? - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Maxaa looga hadlayaa Kulanka Maanta Golaha Shacabka?
May 22, 2019 admin446
Waxaa Maanta oo Arbaco ah lagu wadaa in Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay kulankoodii caadiga ahaa ay ku yeeshaan Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho.
Kulanka Xildhibaanada Golaha Shacabka ay yeelanayan Maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 22-ka Bisha May 2019, ayaa Ajendihiisu waxa uu yahay aqrinta koowaad ee wax ka bedelka sharciga Iibka Qaranka (Procurement).
Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa hadda ka socda diyaar garow ku aadan sidii uu kulanka u furmi lahaa,waxaana kasoo qeyb galaya inta badan Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya,kuwaasi oo xalay lagu wargeliyay inuu jiro kulanka Maanta.
Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa isniintii la soo dhaafay kulankii ay yeesheen waxaa ay ku ansixiyeen sharciga badelka Batroolka dalka,waxaana ogolaatay in la ansixiyo 150 Mudane,halka ay diiday 4 Xildhibaan oo kaliya.
Magacyada iyo sababta afar nin oo Al-shabaab ku toogteen shabeelaha Hoose
September 28, 2019 Duceysane